Fanadihadiana momba ny fambolena BSF - kely na lehibe
Famakafakana ny orinasa amin'ny fambolena maggotsa tsy mety
Fandinihana ny fambolena tsiranoka tsy fahita firy - Rehefa manao famakafakana ny fambolena fanaingoana tsy misy fanafana, ny singa manan-danja voalohany hodinihina dia mifandraika amin'ny fitaovana ampiasaina. Ao amin'ny fanadihadiana ny fambolena BSF na ny fandalinana ny omby dia ity no fitaovana ampiasaina amin'ny alàlan'ny fambolena, ny fako sy ny fako. Ny antony lehibe sasany dia ny fandalinana ny fambolena BSF, izany hoe
1. Rohan'ny fitaovana
Ny tena zava-dehibe amin'ny famakafakana ny fambolena BSF dia ny fisafidianana fitaovana. ary ny safidintsika dia ny fako voajanahary, ny fandaniana organika dia tsy manana tombony ara-toekarena manan-danja ary matetika arodana. Ankoatra izany, amin'izao fotoana izao, ny fisiany dia miara-mifangaro amin'ny fako tsy ara-dalàna.
Noho izany, mba hahazoana raki-tsakafo ho an'ny famokarana fitaovam-piadiana, ilaina ny manandrana manodina fako organika. Ny fanontaniana dia hoe: moa ve ny tantsaha afaka manao izany?
Ny fanaovana ny fako organika dia tokony atao ara-dalàna, na amin'ny fikambanana eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny governemanta eo an-toerana. Raha sarotra ny manatratra izany dingana izany, dia afaka miara-miasa amin'ny indostrian'ny sakafo misy tondra-tsakafo ny tantsaha.
Amin'ny ankapobeny dia misaraka tsara ny fisian'ny fako. Ny mpamboly dia tokony hanonitra ny mety ho fako organika izay azo tanterahana tsy tapaka mba hahafahan'ilay kodiaran-tsarimihetsika milamina tsara.
2. Segmentation Consumer
Ny singa faharoa amin'ny famakafakana ny fambolena BSF dia ny fizarazaran'ny mpanjifa. Ity indostrian'ny famokarana herinaratra ity dia nirotsaka amin'ny ezaka hanomezana loharanom-pahalalana azo avy amin'ny trondro sy ny biby fiompy amin'ny vidiny ambany noho ny bioconversion of waste disposal.
Raha toa ny ezaka famokarana dia natao hanoloana ny sakafon'ny trondro kely amin'ny trondro na orinasa mpamokatra biby fiompy, dia hisy fiantraikany goavana eo amin'ny indostria izany.
Satria mihena ny vidin'ny sakafo trondro isan-taona. Ankoatra izany, ny fisian'ny magot dia manana fiantraikany mivantana avy amin'ny tantsaha sy ny tantsaha ihany koa. Afaka mamokatra ireo proteinina hafa ireo izy ireo mba hahafahany mampihena ny fandaniana vokatra.
Ny antoko hafa izay hankafy ihany koa ny vokatra avy amin'ity dingana bioconversion ity dia ny mpamboly legioma sy ny voankazo, noho ny famokarana zezika.
Ny fanadihadiana fahatelo fikarohana momba ny fambolena BSF dia karazana orinasa hitrandrahana. Misy karazany roa ny orinasam-pamokarana famokarana angovo izay efa mivoatra.
Ny karazana voalohany dia orinasa mahaleo tena, izany hoe ireo tantsaha na ireo mpamboly trondro mamokatra magot mba hanome fahafaham-po ny filany manokana
Ny karazany faharoa dia karazana orinasa miaraka amin'ny modelim-pambolena miaro ny plasma. Ny endriky ny fiaraha-miombon'antoka Plasma dia endrika indostrialy izay mety tsara amin'ny famokarana kôpitaly izay hiantsoana ny fototra (core) ho toy ny orinasa BSF.
Ny toerana misy plasma dia manana andraikitra amin'ny fampivoarana ny fivoarana (fihenanana ny fako organika) izay azo atao any amin'ny tobin'ny fitsaboana, ny trano ary ny toy izany.
Ny karazana vokatra vokariny dia naverina avy eo amin'ny fotony mba hohavaozina ao anatin'ny lafarinina masomboly na pellet.
Ny fambolena mamboly dia samihafa amin'ny mizana lehibe telo, izany hoe
Fambolena alika kely
Toeram-pandrosoana goavambe lehibe
Diniho ny fanadihadiana momba ny biby an-tanety toy ny trondro sy ny sakafom-biby. Ity fanadihadiana momba ny biby ity dia ny fanombanana ny tombontsoa azo avy amin'ny fambolena. Ny vokatr'io fanadihadiana io dia azo antoka fa fototry ny fandinihana alohan'ny hanombohana raharaham-barotra
Karazam-barotra momba ny famokarana
Ny endriky ny atody tsy miankina ary ny famokarana vokatra dia avy eo mivarotra ny trondro sy ny biby fiompy biby, tsy misy ny ezaka famokarana vilany na fako. Ny teknolojia dia lazaina fa azo ampiharina avy amin'ny fiaraha-monina raha toa ka manatanteraka ireto singa telo manaraka ireto
Ny lafiny ara-biolojika sy ny famokarana biby dia tsara fitondran-tena
Azo ampiasaina ara-teknika ny teknolojia
Ara-toe-karena dia afaka manome tombontsoa izany
Ny fanadihadiana ataon'ny orinasa dia endrika ara-bola mba hamaritana ny sandan'ny vola na ny fampiasam-bola ilaina amin'ny fanatanterahana orinasa iray, ary mba hamaritana ny fepetra takian'ny orinasa. Ny sasany amin'ireo kajika ilaina amin'ny fanadihadiana ataon'ny orinasa dia
Fanekena sy fifandraisana
Cost (r / c ratio)
Mitotongana-na point / bep) ary
Raha ny tahan'ny R / C dia lehibe noho ny 1, ny orinasa dia azo atao ny mihazakazaka, ary ny mifamadika amin'izany.
Ny fepetra azo tsapain-tanana amin'ity karazana asa ity dia azo dinihina amin'ny fepetra dimy fampiasam-bola toy izao manaraka izao.
Ny sandan'ny sandany (NPV)
Net profit ratio (Net B / C)
Tandrefana fidirana (IRR)
Fepetra takiana (PBP)
Mitotongo mihitsy aza (BEP)
Ny fampiasam-bola ilaina amin'ny famokarana magot dia ahitana trano ho an'ny insectarium, larvarium, tobim-pamokarana biolojika, milina fanontam-pirinty, ary fiara. Ny fari-piadidianao amin'ny fandaniana tsy voafetra dia
Ny saram-pitaterana ny fitaterana ny fandefasana organika,
Ny vidin'ny herinaratra,
Vidin'ny penina menaka palmie, ary
A. Fandrisihana ny fanadihadiana momba ny varotra voalohany
Amin'ny famakafakana io bibikely io, dia heverina fa ny insectarium dia miorina eo amin'ny faritra 2 m2 sy larvarium mitahiry faritra 3 m2
Ny habetsahan'ny fako organika ampiasaina dia 200kg / andro
Magot novokarin'ny 10% amin'ny fanaka. Izany hoe, ny famokarana magot dia 20 kg / andro
Ny herisetra voaray dia ampiasaina amin'ny famokarana pupa na bibikely toy ny 15%, raha ny iray hafa ny 85% dia mivarotra amin'ny indostrian'ny fambolena
Ny vidin'ny varotra amin'ny magot dia Rp7.000 / kg
Ny sandan'ny fivarotana zavamaniry organika avy amin'ny dingana bioconversion dia Rp1.000 / kg.
Maggot Livestock Analysis - Tombantombana momba ny fandaniana amin'ny fandaniana sy ny vokatra famokarana
Ny fandaniana manontolo amin'ny vokatra
Ny vidin'ny vokatra rehetra dia vokatry ny famokarana herinaratra tamin'ny herintaona
Ny fandaniana manontolo amin'ny vokatra: ny fandaniana amin'ny fandaniana + fandaniam-bola
Fiantohana ankapobeny isam-bolana
Ny vola miditra isan-taona = Vokatry ny famokarana magot (kg) X Vidy varotra (Rp)
= (20kg / andro X Rp7.000) X XUMX% X (85 andro - herinandro 365) = Rp43.435.000
Ny sandan'ny tombombarotra azo avy amin'ny orinasa famokarana dia azo ampiasaina amin'ny alalan'ity rindrambaiko manaraka ity.
Profit (Rp) = Total vola miditra (Rp) - Total Cost Cost (Rp)
Fahavitan-tsena ataon'ny orinasa madinika
Miorina amin'ny fanadihadiana momba ny raharaham-barotra etsy ambony, ny fepetra azo tsapain-tanana momba ny varotra famokarana vokatra:
Break Even Point (BEP) amin'ny sokajy
FC: Sarany voavaha
VC: Vidin'ny vidiny
P: Vidiny isam-bolana
Break Even Point (BEP) ao Rupiah
Fandaniana voafetra sy fandaniana tsy maharitra
Fandaniana voafetra = Saran'ny fandaniana / famokarana = 120.000 / 6.205 = 19 Kg
Fandaniam-potoana tsy ara-potoana = Fandaniana tsy voafetra / Famokarana maimaim-poana = 1.850.000 / 6.205 = 298 Kg
Fandaniana fandaniana / (Vola amin'ny Kg - Fandaniam-bola amin'ny Kg) = 120.000 / (Rp7.000 - 298Kg) = 18 Kg
BEP tany Rupiah
Fandaniana fandaniana / 1- (Fandaniana / varotra) = 120.000 / 1- (1.850.000 / 43.435.000) = Rp125.338
Ny teboka na dia ny kilaona aza dia 18kg. Izany dia midika fa amin'ny isa maromaro dia tsy mahasoa izany ary tsy mahavery.
Ny teboka-eny na dia ny rupiah aza dia ny Rp125.338
2. Fiverenan'ny fampiasam-bola (ROI)
ROI = (Profit / Total Cost Cost) x100% = Rp43.435.000 / 1.920.000 = 2.262,24%.
3. Tahan'ny fandaniana vola (R / C)
Ny fepetra azo tsapain-tanana ataon'ny orinasa maodim-barotra dia azo raisina amin'ny alalan'ireo fanambarana manaraka,
R / C = Vola (Rp) / Total vokatra vokatra (Rp) = Rp43.435.000 / Rp1.920.000 = 22,62
Ny valin'ny R / C nahazo ny 22,62 na mihoatra noho ny 1. Ity tarehimarika ity dia maneho fa ny orinasa maoderina maotona dia ny fananganana orinasa.
4. Fe-potoana mitaky (PBP)
Ny fe-potoana famerenam-bola dia azo andrasana hahafahana mamakafaka ny fotoana fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny orinasa fivarotana sakla magot miaraka amin'ny fantsona manaraka:
PBP (volana) = Total vola fampiasam-bola (Rp) / Operating profit (Rp) x 1 taona = (1.100.000 / 41.515.000) x 12 volana = 0,3 volana.
Ny vokatr'ity fanadihadiana ity dia maneho fa ny kapitalim-bola fampiasam-bola amin'ny orinasa famokarana angovo mahazatra dia hiverina mandritra ny fe-potoan'ny 0,3 volana.
B. Fandrarana ny fanadihadiana madinika momba ny varotra
Amin'ny famakafakana io bibikely io, dia heverina fa ny insectarium dia miorina eo amin'ny faritra 100 m2 sy larvarium mitahiry faritra 100 m2
Ny habetsahan'ny fako organika ampiasaina dia 500kg / andro
Magot novokarin'ny 10% amin'ny fanaka. Izany hoe, ny famokarana magot dia 50 kg / andro
= (50kg / andro X Rp7.000) X XUMX% X (85 andro - herinandro 365) = Rp108.587.500
Fandaniana voafetra = Saran'ny fandaniana / famokarana = 32.050.000 / 15.513 = 2.066 Kg
Fandaniam-potoana tsy ara-potoana = Fandaniana tsy voafetra / Famokarana maimaim-poana = 9.900.000 / 15.513 = 638 Kg
Fandaniana voafetra / (Vola amin'ny Kg - Fandaniana fandaniana isan-kg) = 32.050.000 / (Rp7.000 - 638 Kg) = 5.038 Kg
Fandaniana fandaniana / 1- (Fandaniana / varotra) = 32.050.000 / 1- (9.900.000 / 108.587.500) = Rp35.265.149
Ny teboka-na ny teboka amin'ny kilo dia 5.038 kg. Izany dia midika fa amin'ny isa maromaro dia tsy mahasoa izany ary tsy mahavery.
Ny teboka-eny na dia ny rupiah aza dia ny Rp35.265.149
ROI = (Profit / Total Cost Cost) x100% = Rp108.587.500 / 40.450.000 = 268,45%.
R / C = Vola (Rp) / Total vokatra vokatra (Rp) = Rp108.587.500 / Rp40.450.000 = 2,68
Ny valin'ny R / C nahazo ny 2,68 na mihoatra noho ny 1. Ity tarehimarika ity dia maneho fa ny orinasa maoderina maotona dia ny fananganana orinasa.
PBP (volana) = Total vola fampiasam-bola (Rp) / Operating profit (Rp) x 1 taona = (17.750.000 / 68.137.500) x 12 volana = 3.1 volana.
Ny vokatr'ity fanadihadiana ity dia maneho fa ny kapitalim-bola fampiasam-bola amin'ny orinasa famokarana angovo mahazatra dia hiverina mandritra ny fe-potoan'ny 3.1 volana.
B. Fandrarana ny fanadihadiana momba ny varotra ambany
Ao amin'ny fandinihana an'io bibikely io, dia heverina fa ny insectarium dia naorina teo amin'ny faritra 400 m2 sy larvarium izay misy faritra 400 M2
Ny habetsahan'ny fako organika ampiasaina dia 3 taonina / andro
Magot novokarin'ny 10% amin'ny fanaka. Izany hoe, ny famokarana magot dia 300 kg / andro
= (300kg / andro X Rp7.000) X XUMX% X (85 andro - herinandro 365) = Rp651.525.000
Fandaniana voafetra = Saran'ny fandaniana / fametrahana fiterahana = 120.300.000 / 93.075 = 1.293Kg
Fandaniam-potoana tsy ara-potoana = Fandaniana tsy voafetra / Famokarana maimaim-poana = 26.700.000 / 93.075 = 287 Kg
Fandaniana fandaniana / (Vola amin'ny Kg - Fandaniam-bola amin'ny Kg) = 120.300.000 / (Rp7.000 - 287Kg) = 17.920 Kg
Fandaniana fandaniana / 1- (Fandaniana / varotra) = 120.300.000 / 1- (26.700.000 / 651.525.000) = Rp125.440.655
Ny teboka na dia ny kilaona aza dia 17.290kg. Izany dia midika fa amin'ny isa maromaro dia tsy mahasoa izany ary tsy mahavery.
Ny teboka-eny na dia ny rupiah aza dia ny Rp125.440.655
ROI = (Profit / Total Cost Cost) x100% = Rp651.525.000.000 / Rp139.500.000 = 467,04%
R / C = Vola (Rp) / Total vokatra vokatra (Rp) = Rp651.525.000 / Rp139.500.000 = 4,67
Ny valin'ny R / C nahazo ny 4,67 na mihoatra noho ny 1. Ity tarehimarika ity dia maneho fa ny orinasa maoderina maotona dia ny fananganana orinasa.
PBP (volana) = Total vola fampiasam-bola (Rp) / Operating profit (Rp) x 1 taona = (246.500.000 / 512.025.000) x 12 volana = 5,8 volana.
Ny vokatr'ity fanadihadiana ity dia maneho fa ny kapitalim-bola fampiasam-bola amin'ny orinasa famokarana angovo mahazatra dia hiverina mandritra ny fe-potoan'ny 5,8 volana.